FANADINANA BAKALÔREA :: Sazy henjana no miandry ireo izay tratra manao hosoka • AoRaha
FANADINANA BAKALÔREA Sazy henjana no miandry ireo izay tratra manao hosoka
Mampitandrina. Ho hentitra ny tompon’ andraikitra misahana ny fanadinana nasionaly mandritra ny adina an-tsoratra Bakalôrea, izay hotanterahina ny 17 hatramin’ny 20 septambra ho avy izao. Manentana izy ireo mba hialan’ny mpiadina amin’ny fanaovana hosoka satria ho mafy ny sazy mety hihatra amin’izy ireo.
« Raha tena diso tafahoatra ny hosoka hataon’izay tratra dia mety hiafara amin’ny fakàn’ny mpitandro filaminana azy ao anatin’ny efitrano fanadinana mihitsy izany», araka ny fanazavan’ny talen’ny fanaovana fanadinana nasionaly eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, ny Dokotera Rakotoarison Olivier, omaly, teny Ankatso.
Manamafy ihany koa ny tompon’andraikitra fa tsy tokony hitondra ireo antontan-kevitra toy ny kahie na boky mirakitra lesona ihany koa ireo mpiadina mandritra ny fanadinana izay hataony. Tsy azon’ireo mpianatra atao ihany koa mampiasa ireny finday na teknôlôjia azo iraketana lesona ireny mandritra ity adina an-tsoratra ity , araka ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra misahana ny fanadinana nasionaly hatrany.
Mitombo ny isan’ny mpiadina
Ankoatra ny sazy homen’ny Fitsarana dia mety hiakatra Filankevi-pifehezana ihany koa ireo mpiadina tratra manao hosoka. Mety tsy ho afaka miatrika fanadinam-panjakana intsony izy ireo aorian’izany.
Raha tsiahivina dia miisa 74 811 ireo mpiadina ao amin’ny Bakalôrea ankapobeny sy teknika amin’ity taona ity raha 74 577 izany tamin’ny taon-dasa. Ny sokajy A2 no maro indrindra amin’ireo mpiadina. 45 925 no isan’izy ireo. Manaraka azy ny sokajy D izay miisa 16 260. Nampitomboina, araka izany, ny isan’ireo mpitsara ka 1 665 no hanatanteraka izany. Tsy nanokatra foibem-panadinana kosa nefa ny tompon’andraikitra na eo aza ny fitombon’ny isan’ny mpiadina fa ireo efitrano any amin’ ireo efa nisy no hampitomboina , hoy hatrany ny fanazavana. Vinavinaina ho amin’ny 20 oktobra any ho any no hivoahan’ny valim-panadinana bakalôrea amin’ity taona ity.
FIFANINANAM-PIRENENA AN-TSEKOLY :: Ho mafy kokoa ny fitsirihana ireo mpangala-taona
FIRAISAN-TENDRON’NY ANDRIMPANJAKANA :: Manohitra ny hisian’ny tetezamita vaovao ny Filoha mpisolo toerana sy ny governemanta